News | kashmir
News | Tag: kashmir
काश्मिरमा किन रगतको खोला बगाइरहेका छन् भारत र पाकिस्तान ?
एजेन्सी । बितेका ६७ वर्षमा काश्मिरमा धेरै हिंसाका घटनाहरु भए । तर, आजको दिनसम्म पनि काश्मिरले शान्तिको सास फेर्न पाएको छैन । आज पनि उही विवाद चलेको छ काश्मिर कसकोः भारत वा पाकिस्तान, हिन्दु वा मुसलमानको ?
विद्रोहीले काश्मिरको चौकीमा आक्रमण गर्दा ४ प्रहरीको मारिए
श्रीनगर, भारत । शङ्कास्पद विद्रोहीले भारत प्रशासित काश्मिरमा एक प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा चार प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सेनाले सुरक्षा कारबाईमा काश्मिर आन्दोलनरत विद्रोहीको निकट मानिने दुई किशोरहरू उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र काश्मिरको दक्षिणी भागमा मारिएका थिए ।
काश्मिर, भारत । सधैँ अशान्त भइरहने भारत नियन्त्रित काश्मिरमा शुक्रबार भएको गोली हानाहानमा कम्तीमा छ जना विद्रोही लडाकूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काश्मिरको कथा ?
श्रीनगर, भारत । भारत र पाकिस्तानबीचको दुई पक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता स्थगित भएको भोलिपल्ट भारतको काश्मिरमा छ जना मारिएका छन् ।
छोराको अगाडि आमाले नै छोरी बलात्कार गर्न लगाएपछि...
एजेन्सी । भारतको कश्मिरमा एक ९ वर्षीया बालिकामाथि सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भएको छ । आफ्नो बाबुले छोरीलाई धेरै माया गरेपछि सौतेनी आमाले सहन नसकेर आफ्ना छोरा र अन्य ३ जनालाई राखेर सामुहिक बलात्कार गर्न लगाएकी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
किन ६८ वर्षदेखि रगतको खोला बगिरहेको छ काश्मिरमा ? दोषी को भारत कि पाकिस्तान ?
नयाँदिल्ली । भारतको केन्द्रीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले मंगलबार काश्मिर प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेको छ ।
किन काश्मिरमा रगतको खोला बगाइरहेका छन् भारत र पाकिस्तान ?
एजेन्सी । बितेका ६७ वर्षमा काश्मिरमा धेरै हिंसाका घटनाहरु भए । तर, आजको दिनसम्म पनि काश्मिरले शान्तिको सास फेर्न पाएको छैन । आज पनि उही